Malunga ne-JCT-Taizhou Jingchuan Electronics Technology Co, Ltd.
I-Taizhou Jingchuan Electronic Technology Co, Ltd. yinkampani yetekhnoloji yenkcubeko egxile kwimveliso, ukuthengisa kunye nokuqasha izithuthi zentengiso ze-LED, izithuthi zopapasho, kunye nezithuthi zeqonga.
Inkampani yasekwa ngo-2007. Inqanaba layo lobungcali kunye nobuchwephesha obuvuthiweyo kwizithuthi zentengiso ze-LED, iitreyila zopapasho ze-LED kunye nezinye iimveliso, iye yavela ngokukhawuleza kwicandelo losasazo lwangaphandle kwimithombo yeendaba kwaye inguvulindlela ekuvuleni icandelo lezithuthi zentengiso ze-LED e-China. Njengenkokeli yeemoto zeTshayina zemithombo yeendaba ye-LED, u-Taizhou Jingchuan ngokuzimeleyo uphuhlise kwaye wonwabela amalungelo awodwa obuchwephesha besizwe be-30. Yimveliso esemgangathweni yezithuthi zentengiso ze-LED, izithuthi zentengiso ye-LED, kunye nezithuthi zentengiso zomlilo. Iimveliso zibandakanya ngaphezulu kweemodeli zezithuthi ezingama-30 ezinje ngeelori ze-LED, iitreyila ze-LED, izithuthi ezikwinqanaba lokuhamba, iitreyila ze-LED zelanga, izikhongozeli ze-LED, iitreyila zokhokelo lwezithuthi kunye nezikrini zesithuthi esenziwe ngokwezifiso.
Ngo-Matshi 2008, inkampani yethu yanikwa i-2007 China China Advertising New Media Contribution Award; ngo-Epreli ka-2008, yanikezelwa ngeBhaso le "High-tech Award yokuKhokela iMicimbi yezeNdaba yaNgaphandle yase China"; kwaye ngo-2009, yanikezelwa ngesihloko esithi "I-China China Brand Brand kunye neNkomfa yoNxibelelwano 'yeBhaso lokuNikela ngeBhranti' echaphazela i-Chinese Enterprise Brand Star".
Taizhou Jingchuan Electronic Technology Co., Ltd. ise Taizhou, Zhejiang kwiphondo, eyona dolophu iphilileyo China. I-Taizhou ibekwe kunxweme oluphakathi lwePhondo laseZhejiang, kufutshane nolwandle lwaseMpuma empuma, imeko-bume intle. Inkampani yethu ibekwe kummandla wezoqoqosho Taizhou kwaye lula amanzi, umhlaba kunye nokuthuthwa komoya. Inkampani yethu iye yanikezelwa "Taizhou Enterprise Key of Export Cultural" yaye "Taizhou Enterprise Key of Industry Service" ngurhulumente kamasipala Taizhou.
Izixhobo ezinxulumene nemveliso yenkampani zihambile, zigqibile, kwaye ngaxeshanye zonke iintlobo zezixhobo zovavanyo eziphambili kunye nezixhobo. Inkampani ineqela lolawulo elisebenzayo kunye neqela le-R & D, egxile ekwazisweni nasekuqeqeshweni kwabasebenzi bezobuchwephesha abaphezulu kunye neengcali. Ngamandla ophando olunzulu lwenzululwazi, inkampani yethu iseke iindibano zocweyo ezisemgangathweni, amagumbi olawulo kunye namaziko eR & D. Okwangoku, kukho isebe lobuchwephesha bemveliso, isebe lokuhlola ubulunga, isebe lokubonelela, isebe lokuthengisa, isebe lenkonzo emva kokuthengisa, isebe lezemali namanye amasebe, anesahlulo esicacileyo sabasebenzi nolwabiwo lwenzululwazi.
Inkampani ibambelela kumgaqo-nkqubo osemgangathweni womgangatho "wekhwalithi ezintlanu yeenkwenkwezi, efuna izinto ezintsha kwizinto eziyinyani". Ukusukela oko yasekwa ngo-2007, umgangatho wemveliso kunye nenkonzo yasemva kwentengiso iphezulu kakhulu kunaleyo yomzi mveliso mnye. Inkampani ineqela eliqolileyo lokuthengisa ngaphandle kunye neqela lobuchwephesha emva kokuthengisa. Iimveliso zethu zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-50 kunye nemimandla ezifana eYurophu, eUnited States, nakuMbindi Mpuma. Kule minyaka idlulileyo, ibisanelisa abathengi ngokusebenza ngokukuko kunye neenkonzo ezikumgangatho ophezulu.
Umsebenzi weJingchuan: Zonke iimbombo zehlabathi mazonwabele umthendeleko obonwayo
Umgangatho weJingchuan: Ubuchule, Ukunyaniseka, uPhuhliso kunye nokuPhumelela
Inkolelo kaJingchuan: Akukho nto ehlabathini ayinakwenzeka
Injongo kaJingchuan: Ukwakha uphawu lwehlabathi kwicandelo lezithuthi zentengiso ezihambayo
Uhlobo lweJingchuan: ngokunyanisekileyo nangokukhawuleza, gcina isithembiso
Ulawulo lweJingchuan: Injongo kunye nokujolisa kwiziphumo
Kwangelo xesha, uJingchuan ebebambelele kuphuhliso lobuchwephesha oluqhubekayo ukwenza ixabiso kubathengi, elithathwa njengomthombo wamandla kwishishini. I-Jingchuan iphumelele ukuthembela kunye nentsebenziswano yabathengi kwihlabathi liphela ngokwandisa amandla ayo okuvelisa, ukubalasela kokubanakho okwenza ngokwezifiso kunye nokukwazi ukuhambisa okugqibeleleyo.
Ejamelene namathuba amatsha kunye nemiceli mngeni, uJingchuan uzakuqhubeka nenjongo yakhe yokudibanisa "ukudala ubukumkani beshishini ngamavili", ezimisele ukuba ngumnikezeli ngenkonzo yokusebenza ngokubanzi yemithombo yeendaba ekhwele eTshayina. Uphando olunzulu kunye nophuhliso lwezithuthi zemidiya ze-LED, iitreyila ze-solar kunye nezinye iimveliso, ukwenzela ukwenza igalelo eliphantsi kuphuhliso lwamashishini esizwe amaTshayina.
Ekhokelwayo Iinkuphelostencils Mobile, Mobile Ngokukhokelwa Screen Iinkuphelostencils, Ekhokelwayo Iinkuphelostencils Mobile For Sale, Iselfowuni eLijongene neBillboard Truck, Ekhokelwayo Inqwelo erhuqwayo, Mobile Led Advertising Iinkuphelostencils,